“कोरोना लाग्दैमा मरिदैन ” : कोरोना संक्रमित भएर निको भएकी ब्रिजेटको कथा - VOICE OF NEPAL
८ चैत्र २०७६, शनिबार ००:२०
573 ??? ???????
जब ब्रिजेट विकिन्स लन्डनबाट अष्ट्रेलिया आएकी थिइन् त्यतिबेला उनको मनमा आफ्नो मिल्ने साथीको विवाहमा मास्टर अफ सेरोमोनी हुने योजना थियो । तर, उनले कहिल्यै पनि त्यो विवाहमा सरिक हुन पाइनन् ।
जब उनले अष्ट्रेलियाको भूमि टेकिन् उनको स्वास्थ्य जाँच भयो । र, उनमा कोरोना भाईरस रहेको पत्ता लाग्यो । त्यतिबेला यो घटना अचम्म लाग्दो थियो उनको लागि । उनले सोधेको पहिलो प्रश्न थियो, “डक्टर के अब म मर्छु ?”
उनले भनिन्, “कसैलाई थाहा छैन । मलाई कोरोना कहाँ लाग्यो ? लन्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा ? या सिंगापुरको ट्रान्जिटमा ? मैले केही थाहा पाएको छैन । जब पहिलो पटक मैले कोरोना लागको फोनबाट थाहा पाएको थिएँ, या निकै त्रसित बनाउने खालको थियो ।”
दुई साता अघि कोरोना भाईरस कस्तो हो ? धेरैलाई थाहा थिएन ।
उनलाई पनि थाहा थिएन । उनी स्वस्थ थिइन् । अस्पताल लगियो । त्यहाँ पुग्दासम्म उनलाई केही भएको थिएन । सामान्य ज्वरो आएको जस्तो थियो । उनी हिंडेरै अस्पताल पुगेकी थिइन् । उनी सम्झिन्छिन् “म बाहेक सबैजना भने पूरै मुख ढाकेर, सेतो हाजमट सुटमा थिए ।”
उनको अवस्था विस्तारै बिग्रिदै गयो । पूरै थकित, गलित जस्तो हुन थाल्यो । छाति पनि दुख्न थाल्यो । तर, सबैभन्दा खराब समय त्यतिबेला भयो जतिबेला उनी अस्पताल बसाईको ८ दिनमा टेक्न पुगिन् । १० औं दिनसम्मको अनुभव यसरी शेयर गर्छिन्, “मलाई लाग्यो म ८० वर्ष बृद्ध हुँ । न त उठ्नै सक्ने, आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा म पुगेको थिएँ ।”
उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार भयो । त्यतिबेला पनि डाक्टरहरुले लगातार दुईवटा परीक्षणमा ‘कोरोना नेगेटिभ’ आएमात्र घर जान दिने बताएका थिए । १३ औं दिनको परीक्षणमा उनी सफल भइन् । उनमा कोरोना देखिएन । उनी निको भइसकेकी थिइन् । तर, उनको ईम्युन सिष्टम केही कमजोर भने अवश्य थियो ।
संक्रामक रोग विज्ञ डा. सन्जय सेनानेक्य भन्छन्, “विकिन्सको सफल उपचारबाट भाईरसका धेरै आयामका बारेमा जानकारी भयो । उनी यो रोगलाई फैलनबाट रोक्नुपर्नेमै जोड दिन्छन् ।” उनी पछिल्लो केही दिनमा अष्ट्रेलियामा संक्रमितको संख्या बढेकोमा चिन्तित छन् ।
अष्ट्रेलिया सरकार र राज्य सरकारहरुले लागू गरेका विभिन्न प्रावधानले पक्कै पनि यसलाई फैलनबाट रोक्नेछ भन्ने डा. सन्जयको विश्वास छ ।
अहिले निको भइसकेर पनि भोलि के हुन्छ भन्ने झिनो डर कोरोना संक्रमित भई निको भइसकेकी ब्रिजेटको मनमा छ । तर, आफ्नो अनुभव सबैमा बाँड्दा यसले अरुलाई जानकारी हासिल हुन सहयोग पुग्नेछ भन्ने उनको विश्वास छ ।
अहिले कोरोनाको आतंक कस्तो भएको छ भने सबैजनाले यसको सुरुवातको मात्रै कुरा गरेका छन् अन्त्यका बारे कसैले केही भन्दैन । यसको अन्त्य दर्दनाक नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यत्ति बुझौं, “कोरोना लाग्दैमा मृत्यु नै हुने होइन । तर, यसको औषधि विकास नभइसकेको कारण सतर्कता भने अपनाउनै पर्छ ।”
एविसी टेलिभिजनको ७ः३० कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्तामा आधारित सामग्री ।
बेन्फिकाका पूर्व खेलाडी डेनियल केनेडीले आँशु खसाल्दै भने , ” मैले क्यासिनोमा सबथोक गुमाए “